Zara Hoyga alaabta guriga lagu kaydiyo | Bezzia
Zara Guriga alaabta guriga lagu kaydiyo
Miyaadan haysan meel aad ku kaydiso tuwaalada ama alaabta nadaafadda ee musqusha? haddaad eegayso alaabta lagu kaydiyo musqusha taas oo aan xallin dhibaatadan oo kaliya laakiin sidoo kale qaadanaysa meel yar, afartan soo jeedin ee Zara Home waxay u badan tahay inay ku xiiseyn doonaan.
Meel yar bay qaataan oo qurux ahaan bay u qurux badan yihiin. Laakiin ma aha oo kaliya, dhammaantood waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad kaydiso tiro wanaagsan oo waxyaabo ah oo hadda aysan heli karin boos musqushaada ah. Dhammaantood u fiirso oo hubi inay ku habboon yihiin baahiyahaaga iyo sifooyinka musqushaaga.
Qalabka kaydinta musqusha ee Zara Home ee aanu dooranay waxay ka samaysan yihiin alwaax, si ay si fudud ula qabsadaan dhammaan noocyada musqulaha, nooc kasta oo ay yihiin, iyaga oo ku daraya diirimaadka. Waxaa jira hal ka reeban, gaari bir kareem ah oo isku mid ah oo isku mid ah. Aan mid walba lafaguro!
1 Kaydka golaha Ash
2 Armaajo qori qudhac ah
3 shelf alwaax ah
4 Trolley leh taayir bir ah
Kaydka golaha Ash
Anaga ugu jecel. Qaybtan kaydinta oo leh qaab-dhismeedka alwaax dambas ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee indhahayaga qabanaya. Malaha sababtoo ah naqshadeeda oo isku dhafan qaab dhismeedka alwaax leh dambiisha awoodda waaweyn Lagu sameeyay suuf cayriin.
Qalabka alaabta guriga (35x28x73 cm) waxaa ku jira saddex dambiil oo aad ku habeyn karto tuwaalada weelka lagu dhaqo, iyo sidoo kale alaabta nadaafadda ee kala duwan. Uma baahnid inaad ka walwasho wasakhaynta! Basketyadu waa la guuri karaa waana la dhaqi karaa, markaa waa inaad kaliya gelisaa mashiinka dharka si aad u hesho sida kuwa cusub. Wali ma go'aansan kartaa? Malaha qiimuhu wuxuu kaa caawinayaa inaad go'aansato; wuxuu ahaa 79,99 €.
Armaajo qori qudhac ah
Ma waxaad raadinaysaa alaab guri oo ka yar tii hore? Mid ka mid ah oo aad ku haboon karto gees kasta? Golahan kaydka alwaax qudhac ah (28,20×18,50×88,30) ku haboon waxa aad raadinayso. Waxa kale oo ay leedahay a Qaabka casriga ah, ku habboon qurxinta musqusha hadda iyo kuwa casriga ah.
Alaabta guriga ayaa isku dhafan afar meelood oo kayd ah meel sare oo kala duwan taas oo sahlaysa in wax kasta oo musqusha ku jira la ururiyo oo la nadiifiyo. Meelo loogu talagalay inay ka kooban yihiin alaabada nadaafadda iyo saadka nadiifinta oo aan aad u badnayn tuwaalo badan sababtoo ah cabbirkooda.
Ahaanshaha sariir alwaax ah iyo taageeridda khaanadda afraad ee dhulka, waxay noqon doontaa gaar ahaan muhiim ah in la daryeelo qoyaanka, ka fogaynta inta suurtogalka ah ee meelaha bannaan ee ay caadiyan tahay in biyuhu ku soo dhacaan dhulka. Waa tii ugu weynayd balse aan ka helnay alaabtan, khaanadahaas oo aad u hooseeya oo sidoo kale kugu qasbaya inaad ka guurto hal meel si aad awood ugu yeelato inaad nadiifiso. Abaalmarintaada? La mid ah gabalkii hore ee alaabta guriga, €79.99.
Mid kale oo ka mid ah qaybaha kaydinta guriga ee Zara ee musqusha. Qalabka alaabta guriga oo ka fudud kii hore laakiin aan ka jabnayn. Tani shelf alwaax qudhac ah Waxay ku fadhidaa meel yar (55x25x80 cm.) waxayna kordhisaa booska kaydinta musqusha si fudud. Waxay ku siinaysaa saddex khaanadood oo aad ku habayn karto alaabta musqusha ee kala duwan.
Shelf-kani waxa uu ku fiican yahay in la isku hagaajiyo noocyo kala duwan oo shay ah iyo, qaabkeeda awgeed, waxa ay la qabsataa deegaanno badan. Tani laga heli karo laba dhammayn, sida aad ka arki karto sawirkan soo socda, kaas oo sahlaya la qabsigiisa.
Ma jeclaan lahayd in aad haysato gabal alaabta guriga oo kale ah musqushaada? Taladayadu waa in haddii aad doorato shelf this, the oo ay ku jiraan dambiilyo, si alaabta ugu yar aysan ugu dhicin wax yar oo ka soo dhacay shelf. Aad bay kuugu fududaan doontaa, marka lagu daro, inaad ilaaliso nidaamka dhexdiisa.
Trolley leh taayir bir ah
Tani waa shaygii aan bilowgii ka hadlaynay. Gaadhi leh taayir bir ah oo Zara Home ay ku jirto qaybteeda jikada laakiin aan u malaynaynay inay waxtar u yeelan karto musqusha oo kale ama ka badan. Waxay leedahay awood ballaaran (47,20 × 16,70 × 74,70 cm) iyo midabka kareemku wuxuu ka dhigayaa mid si fudud ugu habboon meelo bannaan oo leh qaabab aad u kala duwan.
Chambermaids-ku waa kheyraad aad u wanaagsan si loo kordhiyo booska kaydinta qol kasta, maadaama si fudud loo dhaqaajin karo oo loo dhaqaajin karo. Waxay ka kooban tahay saddex dherer oo kaydinta, dambaska gacmaha iyo taayirrada lagu qaado. wuxuu ahaa 79,99 €.
Ma ka heshay alaabtan kaydinta musqusha ee Zara Home mid soo jiidasho leh?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Zara Guriga alaabta guriga lagu kaydiyo
Hordhaca March ee Movistar +
digir leh bolse iyo ham